Ngamanye amaxesha andizivumi ukuba ndivuke, ndifuna ukulala ndize ndibone le nto iphupha. Ngamnye wethu wayevame ukuphupha ngephupha elidangayo, kwaye emva kwesinye iphupha eliqhwithelayo ndifuna ukufunda okungakumbi ngamaphupha aphikisayo, kunye nento abaphupha ngayo. Ngoko, lithini na amaphupha aphilileyo?
Iingcali zengqondo zithi amaphupha angenangqondo okanye "amaphupha ngothando" uphupha ngisho nabantwana, kwaye abadala siba ngabafundi abanamava, ngakumbi ngakumbi amaphupha ethu. Kwaye abafazi abaneminyaka engama-25 ukuya kwimizuzu engama-40 ubudala abanesifo esibuhlungu. Iingcali zenzululwazi zikholelwa ukuba malunga nama-10% amaphupha kubantu- Ubuthongo obuhle buphela ngo-55% wabasetyhini kunye ne-15% yamadoda ukusuka kwiminyaka eyi-25 ukuya kwe-35.
Ngako oko kuthetha ukuthini amaphupha angcolileyo? Kutheni sifuna ngazo ngabo? Mhlawumbi bathwala iiminqweno zethu zangaphakathi, okanye ababhekiseli kwiminqweno yesondo, kodwa into ethile imihla ngemihla. Kungenzeka ukuba siphupha ngesondo kuba ihlala kwindawo enye ebalulekileyo ebomini bethu, kwaye andicinga ukuba kufanelekile.
Kwaye sifumana i-orgasm ephupheni? Ewe, nangona ubulili bethu obuhle bubumnandi kakhulu kunabantu, kodwa ngokubudala, amadoda ayanda kubona amaphupha enkanuko. Amaphupho ama-Erotic ajwayele ukuphupha ngalabo bantu abathi ngokwenene banqatshelwe ngokwesondo, oko kukuthi, kubonisa ukuba umntu uhlaselwe ngokwesondo. Iingcali zenzululwazi zikholelwa ukuba i-orgasm ifunyenwe ngabafana abaneminyaka engama-20 ubudala, kunye nomfazi emva kweminyaka engamashumi amane, nje kuphela le minyaka ibonwa njengeminyaka yokunganeliseki ngokwesondo. Ngokuqhelekileyo, amaphupha omntu ongenakunqwenelekayo awanakuthathwa njengento yokuphambuka, ngoko ke ayifanele ayamoyike.
I-sexologists ichonge ezintathu iintlobo zesondo zobomi. Eyokuqala ivulekile, oko kukuthi, umntu ulala ngesipiliso, loo maphupha ahlala ethwala iminqweno eyimfihlo, ufuna ntoni, kodwa ungathini na.
Uhlobo lwesibini lubaluleka, ubuchopho bufakela iphupha, ngoko kubonakala ngathi liphupha kwaye lingabonakali, kodwa umntu obona iphupha elidibeneyo libona yonke into ngokuhlukileyo kwaye ngenxa yoko amava okuvuswa kwesondo.
Uhlobo lwesithathu luyingozi, oko kukuthi, amaphupha ahlobene nokutshintshana ngokwesondo okanye ubudlelwane bobulili obufanayo, la maphupha ayithethi nto embi kwaye ayithwali naluphi na ingozi. Amadoda, ngendlela esoloko ephupha ngayo amaphupha anjalo, apho azibona njengabesifazane.
I-Sexomnia yindawo engavakaliyo apho umntu olalayo angalala ngesondo kunye nomlingane olele ecaleni kwakhe kwaye akaze avuke. Le ngenye yeentlobo zeendlela zokulala, ezihamba kunye namaphupha aphikisayo.
Amaphupha ama-Erotic anokucaciswa njengawo nawuphi na elinye iphupha - njengokuba, umzekelo, ukuba ubona usana ephupheni, ke le thambile. Kuye kwenzeka ukuba uSigmund Freud uncedise ininzi kwiinkonzo zesondo. Ama-sexologists afumene ukuba amaphupho amadoda kunye namabhinqa ngokuphathelele ngesondo ahluka kakhulu. Nazi ukutolika kwamaphupha aqhelekileyo. Ubani olala naye ephupheni? Kwaye kuthetha ukuthini amaphupha angamaqhinga?
Ukuba ulala nesoka okanye umyeni - abaninzi abafazi baqala ukukhathazeka nokuxhalaba ngesondo kwiphupha kunye nabo. Ngokomgaqo, oku akuyiyo into embi - nje usenayo, mhlawumbi, wayenomvakalelo olufudumele kuye, okanye intukuthelo. I-sexologists ikholelwa ukuba ubulili kunye nomntu owayengumthandayo uyafihla iminqweno yakho eyimfihlelo, ephuma ngaphandle. Ngokufanayo, isondo kunye nomfundi ofunda naye okanye nomfundi ofunda naye, ongaziphefumulanga naye, ufuzisela umnqweno wakho wenkululeko. Ukwabelana ngesondo kunye nomfana ongummelwane ombi kuchaza ukuba unomdla wokungalindelekanga kwaye uphenduke ebomini bakho bobulili, mhlawumbi ufuna into entsha kunye ngokukhawuleza, njengento yesondo kwindawo ongalindelekanga okanye umntu ongalindelekanga, kodwa ngelokugqibela ndiya kukucebisa ukuba ungazami ukuba sele usenomlingani wesini.
Ukuba ulala ngesitonxo sakho okanye nje ngoMdumo , umzekelo ngoMel Gibbson okanye uBruce Willis, oko kuthetha ukuba uneminqweno eyimfihlelo ongazifuna ukuyifumana, ufuna ukuba nezinto ongenalo kwaye ngoko ungenayo. Okanye awukufumananga umntu onobuhle, kwaye ngoko uyitshintshe ngeMdumo ocacileyo ngombono wakho. Hmm, ngubani ongeke afune ukulala ngesilwanyana noMel Gibbson okanye uRichard Gere?
Ukuba ulala nomntu ongekho mnandi kwaye onyanyekayo kuwe - izazi zeengqondo zicinga ukuba unqwenela ukuba neempawu ezikuye, ufuna ukufana naye, kodwa ucinga ukuba oku kuphantsi kuwe. Kwaye kunjalo, ukuba unalo iphupha elinje, ungaqali, cinga ngeempawu ezingathanda ukuzenza ngazo.
Kuthekani kuthiwa ungumlingani wesini ebusweni, okanye ulala ngeshini ? Ndiyabuza ukuba abantu abaninzi banokuzama ukulala ngesinye isibhinqa? Bangaphi abafazi abanjalo? Akuyena wonke umntu oza kuthatha ithuba kulokhu, kuba kubasetyhini akukho nto into esetyenziswa ngayo ukuya kwesondo kunye nendoda. Kodwa masibuyele emaphupheni, isondo kunye nomfazi yiphupha lokuba umfazi unqabile kakhulu, kwaye ukuba usenalo phupha, lifanekisela umnqweno wokuba ufanane naye, ukuba ube naye. Kwakhona kufanekisela ukuba iqabane lakho langoku kufuneka libe linyameko kwaye libonise ngakumbi uthando nothando, kuba isondo sabasetyhini ababini sisekelwe ngakumbi kwimfesane kunye nobubele.
Ngokuqhelekileyo ephupheni, senza isondo kunye nomfokazi. Ngokuqhelekileyo amaphupha anjalo ashiye ukubonakala okubi, amaphupha anjalo kuthetha ukuba ukhathele ubomi bemihla ngemihla, kwaye ufuna ukutshintsha into ebomini bakho, ukufumana ezinye izinto. Ngako-ke niqaphele abafazi ababizayo ukutshintsha into ebomini babo, bongeza into entsha kwindlela yenu yemihla ngemihla. Ukuba ulala nomntu ongekho kwindawo yoluntu ephupheni, okanye ukuba ufunyanwa apha kule ngxaki, kuthetha ukuba kufuneka utywala izidalwa, kuba loo maphupha ubonisa ukuxhalaba kwakho.
Ukuba uphupha ukuba uhlazola, kuthetha ukuba unesidima sokuzithoba, qala ukuziqonda. Abanye abantu baphupha ukuba basemzimbeni wesini esahlukileyo, kuthetha ityhulo elula, uyazibuza ukuba lakho iqabane livakalelwa njani ngexesha lesini.
Xa sele ubhekene namaphupha akho amathandabuzo enomxholo okhuselekileyo, masiqhubekele phambili kwinto eyenzekayo, izazi zeengqondo zikholelwa ukuba amaphupha aphikisayo angalawulwa. Ngaphambili, kuphela i-yogis, ama-shaman kunye nama-aborigines ayebandakanyeke kulo, oko kukuthi, bawisela amaphupha. Ukuze ulandele iphupha lokukhupha, udinga uqeqesho oluninzi kwaye kuthatha ixesha elininzi. Akunjalo ukuba uya kufumana okokuqala okanye okwesibini, kodwa ungakhetha iqabane lokuzonwabisa ngocansi kwiphupha.
Kwaye ke, ukuba uyayithanda le ngcamango, qalisa ukudala iimeko ezifanelekileyo, oko kukuthi, ungaphuzi itiye kunye nekhofi ngexesha lesidlo sasemini, le mini kufuneka ibe lula. Phuza ngamanzi amaninzi, kwaye ungaphuzi uphuzo olunxilisayo kuzo zonke. Ngaphambi kokulala, ungasebenzisi kwaye ungacingi ngantoni na-zama ukuphumla ngokupheleleyo. Thetha ukuze intloko ihlale iphantsi, kwaye bhetele ulale emhlane wakho. Akukho sandi esingaqhelekanga akufanele sikuphazamise. Musa ukulala ngokukhawuleza, zama ukucinga ngeso simo, njani kwaye ungaphi na ukulala ngesondo, kwaye kubaluleke kakhulu! Umele uzame ukulala, kodwa akufanele uhlale uphapheme, kufuneka ubambe le ntetho yegolide, kwaye uhlale kweli lizwe malunga nemizuzu elishumi. Ingxaki ngabaqalayo kukuba balala ngokukhawuleza. Kwaye, emva kweyure nesiqingatha emva kokulala, uya kuya kwindawo olala ngayo kwimiboniso yakho, kwaye ebaluleke kakhulu kumntu ommele. Jabulela amaphupha akho, bafazi bam abathandekayo!
Incwadi ephuphayo yokuphupha: ukuchazwa kwamaphupha ngomama okhulelwe
Intsikelelo yeenwele eziwele ephupheni
Ngaba kulungile ukuba uloyike iphupha apho kukho ummese?
L`Oreal - inkampani yokonkcola yanamhlanje
Kutheni: yonke into malunga nezinto zonke, iimfihlelo zendalo
Ndifuna iinwele ezintle, ezinempilo
I-kroti ne-prune saladi
Yiyiphi intombazana kufuneka ibe ncinane xa yenza ngesondo